Rooble oo isa soo hor fadhiisiyey Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed iyo Amar adagna dul dhigay | Somsoon
Home WARAR Rooble oo isa soo hor fadhiisiyey Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed...
Rooble oo isa soo hor fadhiisiyey Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed iyo Amar adagna dul dhigay
Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sarre iyo Ra’iisal Wasaare ku-xigeenka dalka.
Kulanka uu Ra’iisal wasaaraha la qaatay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed ayaa ku qabsoomay jawi wanaagsan, ayada oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka kuraasta gobollada Waqooyi, sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisal wasaaraha.
Inta uu socday kulanka Rooble ayaa faray Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed inay muddo kooban xal uga soo gaaran khilaafka ka dhex aloosan ee sababay in guddiga doorashooyinka Somaliland u kala jabo labo garab.
Rooble ayaa ugu dambeyntiina labada mas’uul ku booriyey muhiimada ay leedahay in la xaliyo kala aragti duwanaanshahooda arrimaha doorashooyinka, si ay u qabsoonto doorashada xubnaha labada aqal ee gobollada Waqooyi.
Si kastaba, Kulanka maanta ayaa imanaya xili uu Ra’iisal wasaaraha shalay sheegay inuu wado wada-tashiyo ku aadan arrinta Somaliland, isla markaana meel fiican ay marayaan wada-hadalladu, si meesha looga saaro khilaafka ka taagan doorashadooda.
Article horeWasiirka Gaashandhiga Soomaaliya oo Muqdisho ku soo dhoweeyay dhiggiisa dalka Ireland
Article socoda Natiijada Imtixaanka Shahaadiga ah oo la shaaciyey iyo + Side Kaalimaha loo kala galay